4 Tilmaamood oo noqda kuwa ugu horeeya mashiinka raadinta Google - Creativos Online | Abuurista khadka tooska ah
Haddii uu jiro tartan ka dheer wareegga Formula 1, taasi waa tartanka raadinta Google. Heerka SEO, qof kastaa wuxuu doonayaa inuu noqdo kan ugu horreeya dadweynaha. Marka qof qoro eray, haddii booskeennu wax ka qabto, waxaan dooneynaa inaan marka hore soo muuqano. Waa hagaag, ka hooseeya kuwa bixiya. Uguyaraan waan isku dayeynaa.
Google aad ayey u adag tahay inaad isku dhigto oo kaliya maahan talooyin waa inoo mudan tahay. Gaadiidka isticmaalaha iyo xaddiga badan ee ka kooban ayaa door ka ciyaara. Taasi waa sababta talaabooyinka soo socda ee aan ku qaadi doono maqaalka aysan aheyn khiyaano. Iyagu waa koox duruufo ah oo ay tahay inaad fuliso, laakiin, kuma filna, inaad taqaanno kuwan. Mawduucu waa inuu ahaadaa mid la jaan qaadaya tagsyada, qaybaha, sharaxaadda maadada, iwm. Sidan ayaad ku dhowaan doontaa booska 1 ee darajooyinka astaamaha raadintaada.
Kuwa soo socda tilmaamaha in ay noqdaan kuwa ugu horreeya mashiinka raadinta Google Way kugu soo dhoweyn doonaan.
2 La jaan qaado dhagaystayaashaada
3 Tartan, sidoo kale xulafo
4 Sawirro, ayaa ka muhiimsan sidii ay umuuqatay
Abuuritaanka jadwalka tifaftirka ayaa kuu oggolaanaya inaad mudnaanta siiso howlahaaga mawduucyada ah, ku soo biir fariin aad ku dhajinaysid bartaada iyo waxqabadka bulshada. Tan ugu muhiimsan, sii dhagaystayaashaada ku mashquul adigoo ka hortagaya waxyaabahaaga inay noqdaan fadhiid ama soo noqnoqda.
Abaabulka ayaa gabi ahaanba muhiim u ah guushain kasta oo qorshahaaga mawduucu uusan had iyo jeer sahlanaan doonin in lagu dheganaado. Ku billow sameynta jadwal, ka dibna maskaxda ka rog - su'aalahee ka jawaabi kartaa? Mawduucyo noocee ah ayaa khuseeya? Sidee wax u dhiiri gelin kartaa?
U qaybi mawduucaaga qoraallada bulshada, qoraallada blogga, nuqulada goobta, tixraacyada, fiidiyowyada, iwm. Waxay kuxirantahay qaabka baloog, degel, degel aad gacanta ku hayso. Iyo tan kor ku xusan, kor u qaadidaada, maaddaama maadadu si dhif ah u guuleysato kaligeed, oo qorsheyso soo noqnoqodkeeda: maalin kasta, toddobaadle, bille.
La jaan qaado dhagaystayaashaada
Diirada saarida waxyaabahaaga waa in lagu hagaajiyaa dadweynaha booqanaya kuna biiriso guusha ganacsigaaga. Soo-booqde cusub, tusaale ahaan, ma laha daacadnimo sumadeed. Sidaa darteed, diiraddu waa inay ahaataa dhiirrigelinta nuxurka si loogu beddelo, nuxurka iyo yoolalka, iyo qiimaha sumcadda si loo kobciyo.
Macaamiisha jira, dhanka kale, waxay leeyihiin mudnaan iyo baahiyo kala duwan., sidaa darteed waxa ku jira waa in loola dhaqmaa si ka duwan. Ku barbaarinteeda, kobcinta kobcinta, iyo fududeynta awoodaha kor u kaca ayaa fure u ah wadida qancinta macaamiisha iyo iibka mustaqbalka.
Tartan, sidoo kale xulafo
Waxaad ka heli kartaa istiraatiijiyad ganacsi tartanka oo loo aaneyn karo midkaaga. Taasi waa, haddii aad ku iibiso cadarka internetka, raadi ereyada muhiimka ah ee tartankaagu isticmaalo. Sidan ayaad ku abuuri kartaa wada hadal isla markaana aad ku soo jiidan kartaa martida cusub meheraddaada. Tanna, qadarka taraafikada ee gaadha boggaaga ayaa kordha.
Sawirro, ayaa ka muhiimsan sidii ay umuuqatay
Gaar ahaan markaan ka hadlayno waxyaabaha dhabta ah sida cadarka kor ku xusan. Waxyaabaha muuqaalka ah, sida sawirrada, fiidiyowga, iyo sawir-qaadashada, waxay u noqon karaan aalad aad u awood badan nooc kasta oo raadinaya inuu si wax ku ool ah ula xiriiro akhristayaashiisa.
Ku billow adigoo u qaybinaya qoraalka jirka sawirro soo jiidasho leh (ku dar sawirada Alts) si aad ugu dhiirrigeliso dhagaystayaashaada inay dhammaystiraan akhriska ayna kordhiyaan darajadaada makiinadaha raadinta. Infographics sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa isku-ururinta waxyaabaha ku jira shaashadaha muuqaalka ah soo jiidasho leh oo si fudud loo fahmi karo.
Soo-booqdayaasha boggaaga sidoo kale waxay kaa filayaan inaad bixiso nuxurka fiidiyowga. Tus shakhsiyaddaada sida aad ugu xirmi karto iyaga adoo siinaya macluumaad daboolaya baahidooda. Sida loo duubo fiidiyowyada, demo, iyo markhaatiyada macaamiisha ayaa ah dhammaan fursadaha tixgelinta.
Tilmaamahan sida kuwa kale oo badan ayaa naga caawin kara inaan dhigno bartayada booska koowaad. Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo qodobbada ugu badan ee suurtogalka ah, sababtoo ah baahida weyn ee ka jirta shabakadda. Haddii aan tixgelinno si aan u iibino wax soo saar kasta ama aan u qorno maqaal kasta waxaa jira malyan goobood oo dheeraad ah, shaqo dheeraad ah waa inaan qabannaa. Maaddaama mawduuca iyo SEO-ga ay u marayaan barnaamijyo ay ka mid yihiin Yoast SEO ay muhiimad weyn u leeyihiin alaabteenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 4 Tilmaamood oo noqda kuwa ugu horeeya mashiinka raadinta Google
Pigzbe barnaamijka bara carruurta ku saabsan cryptocurrency
Naqshadeynta ruqsadaha si ay u galaan caymis